FRP ANDIAN-DAHATSORATRA VOKATRA - CHINA Hebei TOP-METAL I / E
Androm-piainan'ny ny FRP / GRP fantsona tsara toy ny tsy misy anatiny na ivelany harafesiny, indray mandeha mety ho resin dia nofantenana manokana fandidiana toe & dia araka ny tokony ho nanohana ety ivelany dia afaka mora foana ny androm-piainany manantena ny 15-20 taona.
Tsy mety ho an'ny malemy ny matanjaka amine avy amin'ny zavatra simika ny ranoka masiran'i alkaline rano & ranoka mandevon-javatra.
Tsy misy fepetra ny ivelany epoxy coating.
Ny lanjan'ny FRP fantsona kely dia be noho ny mifanitsy MS na azo tsapain-tànana fantsona izao no mora transportable & natsangana vokatry ho nihena levitra vidin'ny.
Ity tontolo ity dia manana hery tsara ny lanjan'ny fananana. Raha ny tahan'ny ny hery isaky ny vondrona ny lanja heverina, GRP / FRP composites lavitra noho ny vy, karbonina sy Stainless vy araka ny hita ao ambanin'ny latabatra.
Material Hakitroky (g / cm³) Tensile hery (Mpa)
Ductile vy 7.6 420
Afo Retardant fananana:
Fantsona azo vokarina amin'ny afo manokana retardant fananana ho amin'ny afo niady fampiharana.
Orinasa afaka mampiasa FRP / GRP fantsona vita amin'ny afo retardant resin inorder mba hampihenana ny mety ny fantsona ireo misambotra afo tamin'izany andro izany hahazo naniry tsindry ao amin'ny rafitra tsy amin-tahotra ny lekage noho ny harafesiny izay tena fahita tranga in malemy fanahy vy fantsona .
Fomba ny mpanamboatra
Manome resin manan-karena ambonin'ny harafesiny dia toy izany no tsara kokoa amin'ny fanoherana
Nisafidy ho ambany PN naoty & ambany habe
Afaka ny ho mora foana ho an'ny kely dia be
Tsara ho lehibe savaivony & avo PN naoty
Cost mahomby raha ampitahaina amin 'hanolotra mametraka-up
1.For tanteraka FRP / GRP fantsona
Butt & andilany fomba
Raikitra flange bolting fandaharana
Stubend amin'ny mahamenatra flange bolting fandaharana
2.For tanteraka thermoplastic fantsona
Butt welding mampiasa fitaratra milina
3.Thermoplastic + FRP / GRP fantsona
Butt welding fampiasana Machine / Manual + Butt & andilany for FRP / GRP
Solvent simika + FRP / GRP
Design Codes ampiasaina ho fantsona:
Previous: PTFE Liner sodina ANDIAN-DAHATSORATRA VOKATRA
Next: HDPE ANDIAN-DAHATSORATRA PRODUCTS
tafo sodina Fittings npt kofehy faladiany
npt threaded tafo sodina sy ny Fittings
Stainless vy npt ny BSP iray kofehy nonon'ny farany
karbaona threaded fantsona vy Fittings
1/4 lehilahy BSP kofehy nonon'ny Din 2982